Accueil > Gazetin'ny nosy > COVID-19 : Variant Omicron Mampanahy ny sidina avy any Frantsa
Ny 6 novambra lasa teo no nisokatra ho an’ny sidina hanabakabaka avy any Eoropa ny sisin-tanin’i Madagasikara. Hatreto aloha dia mbola ny sidina avy any Frantsa ihany no miditra eto amintsika, ary mbola mitohy foana izany raha tsy misy ny fanapahan-kevitra vaovao raisin’ny fitondram-panjakana. Mampanahy mafy anefa ireo sidina avy any Frantsa, ankehitriny, noho ny fisian’ilay tsimonkaretina Covid-19 vaovao nampitondraina ny anarana hoe “Variant Omicron” izay mampihorohoro ny ankamaroan’ny firenen-dehibe.
Firenena eoropeanina maromaro no efa nahitàna an’io tsimonkaretina vaovao io izay tsiahivina ihany fa nipoitra tao Afrika atsimo, tapa-bolana lasa izay. Efa nahitana tranga vaomarina ao Frantsa, Belgique, Grande Bretagne, Pays-bas ary Allemagne. Noho izany, raha mbola misokatra ho an’ireo sidina avy any Frantsa ny sisin-tanintsika dia azo eritreretina mihintsy ny hidiran’ny Variant Omicron eto amintsika satria na ireo firenen-dehibe aza tsy nahasakana ny fidiran’io Covid-19 endriny vaovao io. Hiarahan’ny rehetra mahafantatra ny fomba fiasan’ny Malagasy izay matetika goragora, ny resaka kolikoly koa etsy andaniny manampy trotraka.
Tsara marihana fa araka ny filazan’ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS) dia mbola mantajaka noho ireo variant ana coronavirus rehetra efa nisy hatramin’izay ny Omicron, ary ahiana mafy ny fiparitahany manerana ny firenena maro ao anatin’ny fotoana fohy. Efa misy azy daholo moa amin’izao fotoana ny kaontinanta rehetra, ary firenena maro no tsy niandry ela fa avy hatrany dia nanakatona indray ny sisin-taniny ho an’ireo teratany vahiny, raha tsy handray ohatra afa-tsy i Australie, Japon ary i Indonesie. Ho an’ireo firenena eoropeanina sy Etazonia kosa dia nampiatoana avokoa ny sidina hanabakabaka avy any Afrika atsimo sy ireo firenena afrikanina rehetra efa ahitàna trangana Variant Omicron. Andrasana moa ny fanapahan-kevitra ho raisin’ny fitondram-panjakana manoloana izany toe-draharaha misy eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izany.